ITUNES: NJEHIE 2003 - ITUNES - 2019
Njehie mgbe ị na-arụ ọrụ na iTunes bụ ihe a na-ahụkarị na, ka anyị kwuo, ihe ngosi na-adịghị mma. Otú ọ dị, ịmara koodu njehie, ị nwere ike ịmatakwu ihe kpatara ya, ya mere, mee ya ngwa ngwa. Taa, anyị ga-atụle njehie na koodu 2003.
Code mmemme 2003 na-egosi na ndị ọrụ iTunes mgbe enwere nsogbu na njikọ USB na kọmputa gị. N'ihi ya, a ga-eji usoro ndị ọzọ gbakwasị ụkwụ na-edozi nsogbu a.
Kedu otu esi emezi njehie 2003?
Tupu ịkwaga na ụzọ ndị ọzọ ga-esi edozi nsogbu, ịkwesiri ijide n'aka na nsogbu ahụ abụghị usoro nkịtị. Iji mee nke a, Malitegharịa kọmputa na, ya mere, ngwa apụl nke ị na-arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na kọmputa a chọrọ ịmalitegharịa na ọnọdụ nkịtị (site na Malite menu), a ghaghị ịmaliteghachi ngwa apụl, ya bụ, dobe bọtịnụ Ike na Home na ngwaọrụ ahụ n'otu oge ahụ ruo mgbe ngwaọrụ kwụsịrị osimiri ahụ (dịka iwu, ị ghaghị ijide bọtịnụ banyere 20-30 sekọnd).
Usoro 2: Jikọọ na ọdụ ụgbọ mmiri dị iche
Ọbụna ma ọ bụrụ na ọdụdọ USB gị na kọmputa gị arụ ọrụ zuru oke, ị ga-ejikọta ngwaọrụ gị ọzọ n'ọdụ ụgbọ mmiri, mgbe ị na-atụle ndụmọdụ ndị a:
1. Unu ejikọla iPhone na USB 3.0. Ọdụ USB pụrụ iche, nke akara na-acha anụnụ anụnụ. O nwere nnukwu ọnụego data, ma enwere ike iji ya na ngwaọrụ dakọtara (dịka ọmụmaatụ, eriri flash USB 3.0). Ngwa ngwa apụl kwesịrị ijikọta na ọdụ ụgbọ mmiri, ebe ọ bụ na mgbe ị na-arụ ọrụ na 3.0, ị nwere ike inwe nsogbu na iTunes.
2. Jikọọ iPhone na kọmputa ozugbo. Ọtụtụ ndị ọrụ jikọtara ngwaọrụ apụl na kọmputa site na ngwaọrụ USB ndị ọzọ (igwe, bọtịnụ na ọdụ ụgbọ mmiri, na ihe ndị ọzọ). Ọ ka mma ịghara iji ngwaọrụ ndị a mgbe ị na-arụ ọrụ na iTunes, ebe ọ bụ na ha nwere ike ibu maka njehie 2003.
3. Maka kọmputa na-echekwa, jikọọ na azụ nke usoro usoro. Ndụmọdụ nke na-arụkarị ọrụ. Ọ bụrụ na ịnwe kọmputa desktọọpụ, jikọọ ngwaọrụ gị na ọdụ ụgbọ USB, nke dị na azụ nke usoro usoro ahụ, ya bụ, ọ kacha nso "obi" nke kọmputa ahụ.
Ebe nrụọrụ anyị ekwuola ugboro ugboro na mgbe ị na-arụ ọrụ na iTunes, ọ dị mkpa iji eriri mbụ, na-enweghị mmebi ọ bụla. Ọ bụrụ na USB gị enweghị iguzosi ike n'ezi ihe ma ọ bụ na Apple emebeghị ya, ọ bara uru iji dochie ya kpam kpam, n'ihi na ọbụna mkpụrụedemede dị oke ọnụ na Apple nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi.
Anyị na-atụ anya na ndụmọdụ ndị a dị mfe nyere gị aka idozi nsogbu ahụ na njehie 2003 mgbe ị na-arụ ọrụ na iTunes.